အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၄
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၄
Posted by kai on Jan 3, 2014 in Myanmar Gazette, News | 30 comments
အခြေခံဥပဒေပြင်ရေး မှာ ပြည်သူတွေ ပါဝင် ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
ကျဆုံးနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အတွက် အစိုးရ တောင်းပန်ဖို့ ဦးကိုကိုကြီး ပြော
အကျဉ်းသားတွေ ကို ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေးဖို့ အစိုးရ ကြေညာ
ရဲတပ်သား သတ်ဖြတ်ခံရမှု ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ပြော
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထုတ်ဖော်ပြောဆို
မြန်မာ့သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရေး တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များ လက်တွဲမှုလိုအပ်ဟု ဝန်ကြီးဦးခင်ရီပြော
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမည့်အစား တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်သင့်ဟုဆိ
တသက်တာ စာပေဆုရှင် စာရေးဆရာမကြီး ခင်ဆွေဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ကယား ဒေသခံများ လျှပ်စစ်မီး သုံးခွင့်မရသေး
လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြို ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့် သမ္မတ ထပ်မံ ထုတ်ပြန်
ထိုင်းနှစ်သစ်ကူး ၅ ရက်တာကာလအတွင်း လူ ၃၃၄ သေဆုံးခဲ့
ရိုးရာဓလေ့ဖြင့် လိင်အကြမ်းဖက်မှုဖြေရှင်းနည်း အမျိုးသမီးနစ်နာ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲ အစိုးရတပ်အရာရှိ ၂ ဦးကျဆုံး
Myanmar to privatise railways soon
ASEAN panel on investment to meet in Myanmar
Burma commutes death sentences jail terms
Myanmar pardons inmates to mark independence day
BurmaMyanmar Amnesty does not free all political detainees
Journalist criticizes police over assault probe delay
Myanmars Leader Backs Change to Constitution
Journal breached ethics says Information Ministry
Users’ groups help to preserve forests strengthen democracy
Myanmar’s economy Reality check
ACHC report says Myitsone dam is environmentally friendly
Myanmar commutes death sentences…
MP links opium crop rise to big construction projects
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် ပြည်သူလူထု၏ တောင်းဆိုသံများ ကျယ်ပြန့်စွာ ထွက်ပေါ်လာချိန်၌ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၁ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
“ဧရာဝတီအတွက် ပန်ကြားချက်” ဟူ၍ ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုကြေညာချက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် ယတိပြတ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ “အမျိုးသားရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ သဟဇာတ ဖြစ်ရေးကို ရှေးရှုလျက် သက်ဆိုင်သူအားလုံးတို့က မြစ်ဆုံစီမံချက်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ မလိုလားအပ်သော အကျိုးဆက်များကို ရှောင်ရှားလျက် ဧရာဝတီမြစ်ကို ကာကွယ်လိုသူအားလုံး စိုးရိမ်စိတ်များ ဖြေဖျောက်နိုင်မည့် အဖြေတစ်ရပ်ကို ပူးပေါင်းရှာဖွေရန် တိုက်တွန်းကြောင်း”
ထိုအချိန်က ပြောကြားမှု၌ ယတိပြတ် ပြောကြားခြင်း မရှိသော်လည်း လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၌ NLD ပါတီက မဲအများဆုံး အနိုင်ရပြီး သမ္မတဖြစ်ရန် လက်ရှိရေပန်းစားနေချိန် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောထားကို ယတိပြတ် ပြောဆိုရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
“မြစ်ဆုံကိစ္စက လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စလို မဟုတ်ဘူး။ ညှိနှိုင်းစရာ မလိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီး ယတိပြတ်ပြောရမှာပါ။ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မယ့်ကိစ္စကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူရဦးရွှေမန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးရနိုင်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ လူထုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြေဆိုထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ လုပ်မလား၊ မလုပ်ဘူးလား နှစ်ခုကိုပဲ ပြောစေချင်တယ်။ အရင်အစိုးရဟာ မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်ဖို့ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုအစိုးရကတော့ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်တာကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့လို့ သမိုင်းတရားခံအဖြစ်က လွတ်ခဲ့တယ်။ နောင်လာမယ့် အစိုးရက ဒါကိုဆက်လုပ်ရင် သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်သွားမှာပဲ”
ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က ပြောကြားသည်။ – See more at: http://news-eleven.com
မြန်မာ့မီဒီယာရဲ့ဦးဆောင်သူတဦးအနေနဲ့ .. ပြောထည့်လိုက်တာမှာ.. “သမိုင်းတရားခံ”လို့ထည့်သုံးထားသမို့.. မြစ်ဆုံကိစ္စကို.. တိုင်းပြည်အတွက်.. မကောင်းတာတွေဖြစ်မယ်… အဲဒီအတွက်တရားခံဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့.. ဦးဆောင်ရည်ညွှန်းကြီးဖြစ်နေတယ်..။
ကျုပ်အမြင်အရတော့.. မြစ်ဆုံကိစ္စဆက်လုပ်သင့်..မသင့်ကို.. လွတ်လပ်တဲ့တတိယနိုင်ငံတခုခုက… ၀င်ပြီးစိစစ်သင့်တယ်ထင်မိတယ်..
ကျုပ်သဘောအရတော့.. မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိစ္စဟာ..မြန်မာပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့.. ဧရာဝတီကိုကယ်တင်ဖို့.. ရေချိုတွေကိုထိမ်းသိမ်းဖို့အတွက်.. မြန်မာပြည်အတွက်… လိုအပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်..။ စိနပြည်မှလုပ်ရမယ်မဟုတ်.. နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကို.. တင်ဒါပြန်ခေါ်ပြီး… တင်ဒါအောင်သူကို.. လုပ်ခိုင်းနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးထင်မိတယ်..။
ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်.. အခြေအနေပေးလျှက်နဲ့.. မလုပ်ခဲ့သူအစိုးရဟာ.. သမိုင်းတရားခံပဲ..။
ဒါတွေ မြင် ရ ကြားရ
People from Indonesian Muslim hardline groups holdabanner and placards duringaprotest near the Burmese Embassy in Jakarta on May 3, 2013. (Photo: Reuters)
မြင်ရသလောက် ကတော့ ၊
Face Book ထဲမှာတော့ ဗမာ ၉၆၉ တွေက ကုလားတွေကို ၊
ဘာလုပ်ပစ်လိုက်မယ် ညာလုပ်ပစ်လိုက်မယ် လို့ အမြဲ ကြိမ်ဝါး နေကြတာဘဲ ။
အပြင်မှာ ၊ လက်တွေ့ ကတော့ ၊
အခု ရက်ပိုင်း မလေးရှားမှာ ရော ၊ ယိုးဒယားမှာပါ ၊ တစ်ပါတ် ကို ၊
အနဲဆုံး မြန်မာ တစ်ယောက် အသတ်ခံနေရတာတွေဘဲ ၊ အမြဲ ကြားနေရတယ် ။
ဒီ ကိစ္စ / ပြဿနာ တွေကို ၊ ရှေ့ဆက် ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတုန်း ။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရက်စက်မှုတွေဆို ကြည့်ရက်စရာမရှိလို့ follow မိတာတောင်ပြန်ဖျက်ရမလိုဖြစ်နေတယ်။
ဆီးဂိမ်းမှာ တရုတ်အကူအညီယူလိုက်ကတဲက မြစ်ဆုံကိုပြန်တောင်းတော့မယ်ဆိုတာခန့်မှန်းမိသား။ အဲဒါပြောတော့လဲ ဆီးဂိမ်းကြီးခမ်းခမ်းနားနားဖြစ်သွားတာကို အဆိုးမြင်တဲ့ မြန်တျန့်မဟုတ်ဘူးအပြောခံ ရသေး ဟေးဟေး။ အခုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဒေါ့ဘူးကွယ်။ ဒီအစိုးရသိသိကြီးနဲ့လုပ်တာပဲဖြစ်မယ်။ မသိဘူး ငြင်းလို့ကတော့ ဒင်းတို့ လူယုတ်မာတွေ။ ဒေါ်စုကတော့ သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှ မမှန်း နိုင်ပါဘူး။ လုပ်ပြီးမှသာ အော် သူဒီလိုလုပ်လိုက်တာပါလားလို့ သူဒါကိုရည်ရွယ်တာပါလားလို့ အဖြေထွက်တာချည်းမို့ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်။ သူဟာ ဘယ်တော့မှ သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ အရင်ချပြလေ့မှမရှိတာ။ လုပ်ပြီးရင်တော့ အကျိုးရှိတာချည်းပဲမို့ ဒီတခါလဲယုံကြည်စွာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ အုံးမယ်။ သူတောင်မှမတတ်နိုင်တော့ရင်တော့ ဒီအစိုးရအပေါ်မှာဝတ်ကြွေးမကုန်သေးဘူးလို့မှတ်ပြီး ဒီနိုင်ငံမှပဲ ၀တ်ရှိသမျှအကုန်ဆပ်ရုံပေါ့။
မြစ်ဆုံကို ဆက် မလုပ်စေချင်ရင် ၊
အစိုးရ / ပြည်သူတွေ က တရုတ်ကြီးကို ၊
လျှော်ကြေး2Billion $ လျှော်ပေးလိုက်ပေါ့ ။
လက်ပန်တောင်း ကိုလည်း ဆက် မလုပ်စေချင်ရင် ၊
လျှော်ကြေး နောက်ထပ်2Billion $ လျှော်ပေးလိုက်ပေါ့ ။
အခုဘဲ ၊ ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီ က အထွေထွေ မန်နေဂျာ က ၊
ဒီလိုသာ ဆက်ဖြစ်နေရင် သူတို့ဆက်ပြီး သည်းခံနေတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ၊
ကြိမ်းဝါး နေသံကြားရတယ် ။
အခုတောင် ၊ KIA ရဲ့ ( တရုတ်ကြီး ဆီကဝယ်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ) ၊
မိုင် ချီပြီး ပစ်နိုင်တဲ့ စနိုက်ပါ ရိုင်ဖယ် တွေ ကြောင့် ၊ စစ်ပွဲတွေမှာ ၊
ဗမာ စစ်သားတွေ တော်တော် အကျအဆုံး ရှိတယ်လို့ ကြားရတယ် ။
သန်းထိုက်ဦး| January 3, 2014 | Hits:1,341
မေးချင်တာက.. မြန်မာပြည်မယ်.. ကမ္ဘာ့လုပ်ငန်းကြီးတွေဝင်လာရင်.. အလုပ်သမားရှိပါသလားဆိုတဲ့.. မေးခွန်းပါ..။
ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားရှိသလား.. အဲ.. မကျွမ်းကျင်ရော.. ရှိပါသလား… လို့..။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတော့.. မြန်မာပြည်မယ်.. အလုပ်သမား..လယ်သမားမရှိလို့.. အိန္ဒိယက..ကုလားတွေတင်သွင်းခဲ့ဖူးတယ်..။
ရန်ကုန်ဆို.. အိန္ဒိယမြို့ကြီးလိုဖြစ်တာပေါ့..။ ကုလားစကားမှမတတ်ရင်.. မြို့ထဲသွားလို့မရပေါ့..။
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးက.. တိုင်းပြည်တိုးတက်တာနဲ့.. ဒီလို၂၁ရာစုခေတ်မှာ.. ထိမ်းမရပါဘူး..။
ထိမ်းမရတဲ့လူဝင်ရောက်စီးဆင်းလာမှုကို.. စနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး.. သုံးတတ်ဖို့တော့လိုမယ်..
ဒေါ်လာ၂သိန်းအထက်ပါသူများ..မြန်မာနိုင်ငံသားပေးရေး.. ဒို့အရေး… ရယ်လို့..။
လူကိုလူလို မဆက်ဆံနိုင်သရွေ့ နိုင်ငံခြားရောက် ပညာရှင် များ ပြည်တော်ပြန် လာဖို့ မရှိနိုင်ဟုဆို ========================================= နိုင်နိုင်ဇော် ========================================= ရန်ကုန် ။ ။ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးတွင် အထောက်အကူပြုမည့် နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာပညာရှင်များ ပြည်တော်ပြန်ရန် အတွက် လူကိုလူလို သဘောထားဆက် ဆံသည့်အလေ့အထများနှင့် ပညာ ရှင်အား နေရာပေး တတ်သည့်အကျင့် များ တာဝန်ရှိသူများ နားလည်ရန်လို အပ်ကြောင်း မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာ ရှင် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်မြင့်ကျော်က ပြောသည်။ ယင်းက ”ဒီမှာသာ ပညာရှင်တွေ ကိုနေရာပေးဆက်ဆံမယ်၊ လူကို လူ လိုဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် အားလုံးပြန်လာ ကြမှာပါ။ တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ဆိုပြီး ဖက်တွယ်နေရင်လဲ အပုပ်အသိုးပဲဖြစ် မှာပဲ။ ကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် နိုင်ငံခြားထွက်ရတာပဲ။ ဒါကိုအပြစ်တင် လို့မရဘူး။ သူတို့တွေပြန်လာဖို့ဆိုရင် တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က နားလည်ဖို့ လိုတယ်”ဟု ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်က ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ရုံး၌ပြုလုပ် သော အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲတွင် ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ပညာရှင် များ အဘက်ဘက်မှလိုအပ်နေလျက် ရှိရာ ရှိသမျှအသင်းအဖွဲ့နှင့် နေရာအ များစုသင့်လျော်သော ပညာရှင်မရှိခြင်း ကြောင့် လူတစ်ဦးတည်းနှင့် တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်သားအများစုတွင်လည်း skill labour ပြဿနာများကြုံနေကြောင်း ယင်းက ထပ်မံပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံခြားမှလုပ်ငန်း ရှင်များနှင့်ပညာရှင်များ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေရာ ရာထူးတူသော်လည်း မိမိလူမျိုးအားနေရာပေးရမည်ဖြစ် ရာ ယင်းနိုင်ငံသားများနှင့် အရည်အ ချင်းတူသူများဖြစ်မှသာ နေရာပေးနိုင် မည်ဟု ပညာရှင်များ၏ပြောဆိုချက် အရ သိရသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေးဖြစ် သူ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်က ” အခုက အလုပ်မရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ရှိတဲ့အလုပ်ကိုပေးဖို့ လူမရတာ။ အဲဒီ အတွက် လူသားအရင်းအမြစ်တွေအ များကြီးလိုအပ်နေတယ်။ လိုအပ်နေ တဲ့ရာထူးကို ဝင်လုပ်နိုင်တဲ့သူမရှိရင် တော့ နိုင်ငံခြားက ဝင်ယူသွားမှာပဲ”ဟုဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် နိုင်ငံသား ပညာရှင်အများစုရှိနေသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ နိုင်ငံတည်ဆောက် ရေးတွင် ပါဝင်မှုအားနည်းနေကြောင်း အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် တန်းထက်မနိမ့်သော ခံစားခွင့်များဖြင့် စည်းရုံးသင့်ကြောင်း ပညာရှင်များက ပြောသည်။
video link လေးကိုကူးသွားကြောင်းခရတ်ဒစ်ပေးပါတယ်သူကြီး
မြစ်ဆုံကိစ္စမှာ မေစု ဓားစားခံဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ မြစ်ဆုံကိစ္စ ကို စပြီးဟောပြောခဲ့တဲ့ဆရာက မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) မဟုတ်လား။ စာရေးဆရာတွေ အဲဒီနေရာမှာ အဟောအပြောသန်တော့ (လူတွေဆိုတာက အနုပညာပါမှ ဖြစ်တာဆိုတော့) ထုံးစံအတိုင်း အနုပညာစွက်တဲ့ နိုင်ငံရေးက အသာရရှိပြီး မြစ်ဆုံဆက်မလုပ်စေချင်တဲ့လူက လူများစုဖြစ်သွားတယ်။ မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ရင် လူတွေ သည်းညည်းလုံးဝမခံနိုင်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ မျှစ်ကြော် နောက်ထွက်မယ့်စာအုပ်က ဒီမြစ်ဆုံကိစ္စလိုမျိုး။ မြစ်တစ်စင်းအပေါ်မှာ လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးတွေ ရှုပ်ထွေးလာပြီး လစ်ဘရယ်သမားက ဘုန်းကြီးကို မလှန်နိုင်ဘဲ နောက်ဆုံးမှာ မျိုးချစ်တွေ အလိုလို ကျရှုံးသွားခဲ့ရတာပါ။ ၀တ္ထုပေမယ့် သိပ်ကို သဘာဝကျလွန်းပြီး ယနေ့မြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ ဆက်စပ်တွေးလို့တောင် ရတယ်။ ဒါက ကြုံတုန်းကြော်ငြာတာပါ။
မြစ်ဆုံကို ဆက်မလုပ်ဘဲ အခုလို low dam တွေဆောက်တာ ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်။ မြစ်ဆုံက လုပ်ကိုလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်၊ လုပ်နည်းမှန်ဖို့ပဲ လိုတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ပြီးတော့ မြစ်ကြီးကို ကိုယ်အပိုင်လို့ယူဆလို့ရရင် တရုတ်နဲ့တော့ တွဲမလုပ်ချင်။ ဖြစ်နိုင်ရင် တရုတ်နဲ့ ဘာမှကို တွဲမလုပ်ချင်ပါ။
ကုလသမဂ္ဂထုတ်တဲ့အထဲ… မြန်မာပြည်က. အစိုးရကအကိုင်အတွယ်မတတ်လို့.. အင်ဖရာမရှိလို့… ရေချိုပြတ်မဲ့နိုင်ငံစာရင်းထဲပါနေသဗျ…
.. မြန်မာတွေ.. မြစ်ဆုံဆန္ဒပြရင်း..ပြရင်း… ရေပြတ်သေမယ့်သဘောရှိတယ်..။
တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လောက် အကျိုးရှိတယ်ပဲ ဆိုဆို
ဒီအစိုးရ နဲ့ လုပ်သမျှ ဘာမှ ဖြစ်မလာတာ အပြင် တိုင်းပြည်က ပိုပိုဆိုးလာတာ
ဒီလောက်ကြာနေပြီမို့ ယုံကြည်ရတဲ့ အစိုးရ တက်မလာမချင်း မြစ်ဆုံ ကိစ္စ လုပ်တာကို ကန့်ကွက်တဲ့ထဲပါနေမှာပဲ။
ဒါမဲ့ ကြားညပ်မဲ့ ကိစ္စ၊ ဓားစာခံကိစ္စကတော့ အလွတ်ကြီးလို့ထင်ပါတယ်။
အမေစုကို ဒီ ကိစ္စထဲ ဆွဲထည့် အပြစ်တင် သူမှန်သမျှကတော့ လူယုတ်မာတွေဖြစ်ပြီး
ဒီမြစ်ဆုံကိစ္စ အမေစု နဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး အပြစ်တင်ရဲ သူတွေက ချီးဘရိန်းတွေလို့ပဲ ယုံကြည်တယ်။ (ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ကြပါ)
လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ သူတွေ မသေသေးပါဘူးးး မီဒီယာတွေ သိချင်သူတွေ မေးရဲရင်သွားမေးနိုင်ကြတာပဲ ဟာကိုနော်။
အလွယ်ရပြီး တနိုင်ငံလုံးသုံးနိုင်.. အဲဒီကမှပိုတဲ့လျှပ်စစ်ရောင်းစားလို့ရတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်မှုကို အကြီးအကျယ်ဆန္ဒတွေပြကြပြုကြတဲ့ မြန်မာတွေခမြာ… နှစ်ရှည်လများစိုက်မှဖြစ်တဲ့.. မြန်မာ့သစ်တောတွေကျ.. ထင်းဆိုက်ပစ်ပြီး.. ဖြုန်းပစ်နေတာ.. ပြတဲ့..ဇယားပါ..။
တောပြုန်းတာဟာ.. မြစ်ကိုလည်းသတ်တယ်..။ နိုင်ငံကိုလည်းသတ်တယ်..။ အဲ.. ကမ္ဘာကိုလည်း…သတ်ပါတယ်..။
ေ-ာက်တလွဲတောင်.. ဒီလောက်မလွဲကြောင်း…။ :buu:
ရှေ့ဆောင်နွားလားဖြောင့်ဖြောင့်သွားက နောက်နွားတစ်သိုက်ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်၏ ဆိုတာလေ။
အဲဒီ အသိမျိုးဝင်ဖို့ ခေါင်းထဲကို အဲဒီ အတွေးအခေါ်ဝင်ဖို့ ဘယ်စံနစ်ကောင်း ဘယ် ဆရာကောင်းမျိုး ရခဲ့ကြလဲဟင်?
အဲဒါ မြန်မာတွေ ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးးးး မြန်မာတွေ ဘယ်တုန်းကမှ မညံ့ဘူးးး တော်တဲ့သူတွေ နယ်နှင်ဒဏ်ခံရပြီး လူယုတ်မာတွေ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေကြလို့ ဒီလိုဖြစ်ကြရတာ။
သစ်တောတွေ… ကျောက်မျက်တွေ… တောင်တန်းတွေ ….သီးနှံတွေ…. သူတို့ ဖြုန်းတဲ့ခေတ်က သေနတ်အောက်ပြားပြားမှောက်ရတဲ့ခေတ်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့မပြောနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတောင် စကားဟဟမပြောရဲတဲ့ခေတ်။
မြစ်ဆုံအကြောင်းသိတဲ့ခေတ်ဟာ ….သူတို့ သေနတ်ခဏသိမ်းထားလို့ ပြောလို့ရနေလို့ ပြောရတဲ့ခေတ်ပါ။မြစ်ဆုံ ကို ကန့်ကွက်နေကြတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံ မတိုးတက်စေချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးးးး
အဲဒီ တောက်တလွဲခေါင်းဆောင်တွေကို မယုံရလို့ကို ရှိတဲ့ဟာလေး ပါမသွားအောင် ကြိုးစားနေရတာပါ။ဒင်းတို့ ဖြုန်းတီးသမျှတွေ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အပြင် ဒီ မြစ်တွေပဲ ကျန်တော့တာလေ။ ဘာကျန်တော့လို့တုန်းးးး??
ကျနော်တို့ အော်သာအော်နေရတာ သူတို့ တကယ်လုပ်သွားရင်လည်း ဘယ်သူမှ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူးးးးးးးးး
ရေထဲကို ချလိုက်တာမှ ပလုံမြည်ဦးမယ် ဆိုတဲ့ သာဓကတွေ အများကြီးပါ။
စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး လောင်မီးပဲကျကျ စေတနာအမှားမို့ လက်ခံပါ့မယ်။
စေတနာမရှိတဲ့ လူယုတ်မာလက်ထဲတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး စိန်စီနိုင်တယ်လို့ ဒင်းတို့ အင်အင်း စားပြောတောင် မယုံရေးချမယုံ။
ဒီနှစ်ထဲလဲ NSA သတင်းတွေ ထပ်ထပ် ထွက်လာဦးမယ်ထင်ပ။
Best science stories of 2013.
Water discovered inamine2miles below the Earth’s surface turned out to beastaggering 2.6 billion years old, researchers announced in May. The pocket, sampled inamine in Ontario, is older than multicellular life.
It’s saltier than seawater with the consistency of light maple syrup, Lollar said in June.
Other minerals discovered by Curiosity also point to flowing water that could have potentially supported life.
Posted: 01/08/14 EST | Updated: 01/08/14 EST
‘The Great Wall Of Vagina’ Is, Well, A Great Wall Of Vaginas (NSFW)
ဆက်ပြောရရင်.. ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမှီလည်း.. ကော်ပီပါပဲ..။
ဒီသီချင်းမျိုးတွေကို မြန်မာသံအုပ်စုတွေမှာ တင်ပြရတာကတော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါက မူရင်း မြန်မာသီချင်းမဟုတ်ပဲ မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ မွေးစား သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်မှာ အကြောင်းပြချက် ရှိနေပါတယ်။ ဒီသီချင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံ နောက်ခံသမိုင်း နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး အင်မတိ အင်မတန် လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ နဲ့ အတူ၊ ဒီကနေ့ မော်ဒန် ကလပ်စစ် သီချင်းတပုဒ်လို့ ဆိုရလောက်အောင် ထူးခြား၊ ရှားပါးသီချင်းတပုဒ်ပါ။ ပင်ကိုယ်ရေး ဂီတစာဆိုကြီး ဆရာ မြို့မငြိမ်း ရဲ့ မြန်မာမှုပြု မွေးစားသီချင်းတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ စာအုပ်ပါ မြို့မငြိမ်း ကဏ္ဍ က အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး ကျနော် လေ့လာ ရှာဖွေထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါး ပါ အချက်အလက်တွေက ကျနော့် ကိုယ်ပိုင် ယူဆချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမိုင်း စာတမ်းတစ်စောင်လိုတော့ ပြည်စုံတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့် ဒီလောက် စုံလင်အောင် ရေး ထားတာမျိုးကိုလည်း ကျနော် ယခင်က မဖတ်ဖူးခဲ့သေးပါ။
တင်ပြထားတဲ့ သီချင်းကိုတော့ အစ အဆုံး နားထောင်ကြည့်စေလိုပါတယ်။ ကျနော် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို နားထောင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ နားလည် ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ထိုက်ဦး၊ မော်လမြိုင် ဇန်န၀ါရီ ၁၄
မွန် ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ကော့ တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇွယ်ရပ် ကျွန်းနေ ဒေါ်ပု၏သား မောင် သာထူးသည် မော်လမြိုင် ခေါင်း ဆေးကျွန်းအနီးတွင် ဇန်န၀ါရီ ၁၃ရက် နံနက် ၁၁နာရီက ငါး ပြက်ပိုက်ဆွဲရာမှ အလေးချိန် ၅၂ပိဿာခန့်ရှိ ကသမြင်ငါးကြီး တစ်ကောင်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါငါးကြီးအား မော် လမြိုင်မြို့ ဘိုကုန်းရပ်ရှိ သံ လွင်ဈေး ငါးအ၀ယ်ဒိုင်တွင် လာရောက်ရောင်းချရာ ကျိုက္ခ မီမြို့မှ ငါးအ၀ယ်ဒိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ငွေကျပ် ၂၂၅သိန်း ပေးဝယ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့နေ့ ချင်းအပြီး သယ်သွားကြောင်း၊ ငါးထက် ငါးအဆီပေါင်းက ပိုမို ဈေးရကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းရှင် များက ပြောဆိုကြသည်။ ““ကသမြင်ငါးအကြီးကြီး ရလိုက်တဲ့လူဟာ နောက်ဆို တံငါလုပ်ငန်းလုပ်လို့ မရတော့ ဘူး။ တံငါလုပ်ငန်းပြန်လုပ် ရင် ခိုက်တယ်တဲ့။ အရင်က လဲ ဒီလိုငါးအကြီးကြီးရဖူးကြ ပါတယ်””ဟု ချမ်းအေးရပ်ကွက် မှ တံငါသည်တစ်ဦးက ပြော သည်။
ဖမ်းမိသောငါးကြီးတစ်ကောင်အားငွေကျပ် ၂၂၅သိန်းဖြင့်ဝယ် အောင်ထိုက်ဦး၊ မော်လမြိုင် ဇန်န၀ါရီ ၁၄ မွန် ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ကော့ တွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇွယ်ရပ် ကျွန်းနေ ဒေါ်ပု၏သား မောင် သာထူးသည် မော်လမြိုင် ခေါင်း ဆေးကျွန်းအနီးတွင် ဇန်န၀ါရီ ၁၃ရက် နံနက် ၁၁နာရီက ငါး ပြက်ပိုက်ဆွဲရာမှ အလေးချိန် ၅၂ပိဿာခန့်ရှိ ကသမြင်ငါးကြီး တစ်ကောင်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါငါးကြီးအား မော် လမြိုင်မြို့ ဘိုကုန်းရပ်ရှိ သံ လွင်ဈေး ငါးအ၀ယ်ဒိုင်တွင် လာရောက်ရောင်းချရာ ကျိုက္ခ မီမြို့မှ ငါးအ၀ယ်ဒိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ငွေကျပ် ၂၂၅သိန်း ပေးဝယ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့နေ့ ချင်းအပြီး သယ်သွားကြောင်း၊ ငါးထက် ငါးအဆီပေါင်းက ပိုမို ဈေးရကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းရှင် များက ပြောဆိုကြသည်။ ““ကသမြင်ငါးအကြီးကြီး ရလိုက်တဲ့လူဟာ နောက်ဆို တံငါလုပ်ငန်းလုပ်လို့ မရတော့ ဘူး။ တံငါလုပ်ငန်းပြန်လုပ် ရင် ခိုက်တယ်တဲ့။ အရင်က လဲ ဒီလိုငါးအကြီးကြီးရဖူးကြ ပါတယ်””ဟု ချမ်းအေးရပ်ကွက် မှ တံငါသည်တစ်ဦးက ပြော သည်။
ပိဿာာ၅၀ကျော်ရှိတဲ့ ကသမျှင်ငါးကြီးကို ၂၂၅ သိန်းဆိုတော့ ဈေးရလှချည်လားလို့ စုံစမ်းကြည့်တာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ် ၃နှစ်က ရခိုင်ဘက်မှာ ပိသာ ၄၀လောက်ရှိတဲ့ ကသမျှင်ငါးကြီး ရဖူးတယ်တဲ့။ အဲဒီငါးရဲ့ စီဖောင်းကတင် သိန်း ၃၀၀ လောက်တန်တယ်တဲ့။ အဲဒီတုန်းက တစ်ပိသာ ၁၀၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့ လိပ်ကျောက်ခွံတောင် အခု တစ်ပိသာ ၅၀၀၀၀လောက် ဖြစ်နေပြီတဲ့။ ငါးအသားကတော့ ငါးခြောက်လုပ်ရင် တစ်ပိသာ ၁၀၀၀၀ ကျော်လောက်ပဲ ရနိုင်ပါတယ်။ အခုငါးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲသတင်းကိုတောင် သိချင်သေးတော့တယ်။
A bluefin tuna caught off northeastern Japan fetchedarecord 56.49 million yen, or about $736,000, Thursday in the first auction of the year at Tokyo’s Tsukiji fish market.
The price for the 593-pound tuna beat last year’s record of 32.49 million yen or about $416,000. The price translates to $1,238 per pound — alsoarecord, said Yutaka Hasegawa,aTsukiji market official.
ဒါကို ဘာသာပြန်ပေးပါ သဂျီး
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2546191/Revenge-Neanderthals-Legacy-genes-ancient-humans-blame-modern-killer-diseases-cancer-diabetes.html#ixzz2raIteVOv